Chikwata cheZimbabwe chatarisana nekupinda mumafainari eChan mushure mekurova Lesotho 3-1.
Chikwata chenhabvu chenyika chema Warriors chapinza gumbo rimwechete mumafainari e 2020 Africa Nations Championships ayo achaitirwa kuCameroon.
Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Prince Dube nechimwe kubva kuna Wellington Taderera zvapa Zimbabwe kukunda pamberi pechaunga icho change chichibhadhara mari inoita iyo madhora gumi emuZimbabwe kumativi enhandare anga achinzi ndiwo akachipisisa.
Mutambo wechipiri neLesotho unotarisirwa mukupera kwemasvondo maviri kwakare kuLesotho. Chikwata chinenge chabudirira chinozobatana nezvimwe zvikwata gumi nezvishanu zvinenge zvabudirirawo muAfrica kuenda kumafainari ayo achange achitambirwa ku Cameroun.
Kukunda kwemaWarrirors uku kwafadza murairidzi wechikwata ichi Joey Antipas uyo akatambidzwa basa iri achitsiva Sunday Chidzambwa.
Antipas abatana nevamwe vemuZimbabwe vari kufarira kukunda kwechikwata chavo mushure mekutatarika mumitambo miviri yeWorld Cup iyo Zimbabwe yakatamba neSomalia.
Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association VaChama Mushamainze vanoti vari kufara zvikuru.
Muteveri wemaWarriors ane mukurumbira VaChris Musekiwa kana kuti “Romario” vanoti vave kutarisa zvakawandisa kudarika Lesotho.
Zimbabwe yabudirira kuenda kumafainari ese eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya avambwa muna 2009.
Izvi zvinoratidza kuti nhabvu yemunyika haisi kuwira pasi kunyange hazvo Zimbabwe iri kurasikirwa nevatambi vakawanda vane tarenda vari kuenda kune dzimwe nyika uko kubobhadharwa mari yakanaka pese panopera mwaka wenhabvu munyika.